Albert Sambi Lokonga Oo Shaaciyey Booska Ay Tahay In Mikel Arteta Uu Ka Caawiyo Iyo Waanadii Thierry Henry - Laacib
Albert Sambi Lokonga Oo Shaaciyey Booska Ay Tahay In Mikel Arteta Uu Ka Caawiyo Iyo Waanadii Thierry Henry
Laacibka da’da yar ee khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Albert Sambi Lokonga ayaa u sheegay tababare Mikel Arteta booska uu jecel yahay inuu ka ciyaaro, kaas oo uu tibaaxay inuu ku helo xorriyad iyo inuu hore ugu socdo afka hore ee weerarka.
Albert Sambi Lokonga oo ay Arsenal £18 milyan oo Gini kusoo iibsatay xagaagii ayaa waxa uu ka mid yahay laacibiinta uu Mikel Arteta aaminsan yahay ee uu bilowgiiba siiyey kalsoonida isaga oo kusoo bilaabay afar ka mid ah toddobadii ciyaarood ee Premier League ee ay dheeleen.
Fursadda uu ka heli doono Emirates Stadium ayaa kasii badanaya intii hore, sababtuna waxay tahay inuu ka faa’iidaysan doono dhaawaca soo gaadhay Granit Xhaka oo tan iyo bisha December ka maqnaanaya garoomada.
21 jirkan ayaa ka ciyaara boosas badan oo khadka dhexe ah, waxaana la weydiiyey halka uu ugu jecel yahay inuu ka dheelo, waxaanu ku jawaabay: “Waxa aan jecelahay inaan noqdo No.8 si aan u caawin karo weerarka, una difaaci karo kubadda.
“Waxa aan helayaa xorriyad badan sidaas ayaanan ku jecelahay. Laakiin sidoo kale waan jecelahay inaan ka ciyaaro No.6 sababtuna waa inay shaqadiisu adag tahay. Labadan boosba waan jecelahay, laakiin waxa iigu muhiimsan aniga waa inaan garoonka ku jiro.”
Lokonga waxa kale oo uu shaaciyey waano uu ka helay halyeyga Arsenal ee Thierry Henry, waxaanu yidhi: “Ka hor intii aanan ku biirin Arsenal ayaan la hadlay, sababtoo ah laba maalmood ayaan la joogay [garoonka tababarka xulka qaranka], kaddibna waan ka tegay. Waxa uu isiiyey talooyin ku saabsan Arsenal, sida ay dadku yihiin, maskaxda aan u baahanahay iyo waxyaabo kale.”